Ye-Mon's Personal Pages: July 2007
၂၆၊ ၇၊ ၂၀၀၇
သြော် လူ့ပြည်လောက၊ လူ့ဘ၀ကား၊
အိုရ နာရ၊ သေရ ဦးမည်၊
ပြောင်လျက် .. ၀င်းလျက် ကျန်စေသတည်း။
0 comments Labels: burmese, poem
4 comments Labels: burmese, public health
၂၃၊ ၇၊ ၂၀၀၇
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး မဟာဘွဲ့ တက်ရာတွင် အတန်းများကို အောဒစ်၊ ခရက်ဒစ်၊ ဂရိတ် နှင့် အောင်ရှုံး ဟူ၍ အမျိုးမျိုး ရွေးချယ် တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ( ပြန်လည်ဖတ်ရှုရန် ) ယခု ဆက်လက်ပြောလိုသည်မှာ ပျမ်းမျှဂရိတ် (Grade Point Average -GPA) ၏ အဓိပ္ပါယ်၊ အသုံးဝင်ပုံ နှင့် မည်သို့ မည်ပုံတွက်ချက်သည် ဆိုသည်တို့ပင်ဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာ ပြောလိုသည်မှာ ပျမ်းမျှဂရိတ် (GPA) တွက်ရာတွင် ခရက်ဒစ်၊ ဂရိတ် အနေဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့သော ဘာသာရပ်များသာ အကျုံးဝင်ပြီး၊ အောဒစ်၊ အောင်ရှုံး အနေဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့သော ဘာသာရပ်များ အကျုံးမ၀င်ပါ။
Term သို့မဟုတ် Semester တစ်ခုတွင် သင်ယူခဲ့သော အတန်းများ၌ ရရှိသော ပျမ်းမျှဂရိတ် ကို ဆိုလိုသည်။
ဆရာ၊ ဆရာမများ အနေဖြင့် ကျောင်းသား တစ်ဦး၏ စာလိုက်နိုင်မှုကို အကဲဖြတ်နိုင်သည်။
အချို့သော အလုပ်ရှင်များက အလုပ်ခန့်ထားရာတွင် အကဲဖြတ်သည့် အချက်တစ်ခုအနေဖြင့် ကြည့်သည်။
ပါရဂူဘွဲ့ ဆက်လက်တက်ရောက်လိုလျှင် မဟာဘွဲ့ တက်ရောက်ခဲ့စဉ် ပျမ်းမျှဂရိတ် မည်မျှ (ယေဘုယျအားဖြင့် - ၃.၅) ရှိရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားရာတွင် ပျမ်းမျှဂရိတ် ကောင်းပါက အားသာသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြပြီးသည့် အတိုင်း ခရက်ဒစ်၊ ဂရိတ် အနေဖြင့် ယူထားသော ဘာသာရပ်များသာ ပျမ်းမျှဂရိတ် တွက်ချက်ရာတွင် အကျုံးဝင်သည်။ ရရှိသော ဂရိတ်ပေါ် မူတည်၍ ပျမ်းမျှဂရိတ် တွက်ရန် အောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ထားသည်။
Grade A = 4
Grade B = 3
Grade C = 2
Grade D = 1
အတန်းတစ်တန်း ယူရာတွင် ရရှိသော ခရက်ဒစ် (စာသင်ချိန် နာရီပေါင်းကို ဖော်ပြသော အညွန်းကိန်း) ကိုလည်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်သည်။ စာသင်ချိန် နည်းသောအတန်းမှာ ခရက်ဒစ် နည်းနည်းသာ ရပြီး စာသင်ချိန်များသော အတန်းမှာ ခရက်ဒစ် များများ ရသည်။
ဘာသာရပ် တစ်ခုစီ၏ ခရက်ဒစ် နှင့် ဂရိတ် တို့၏ မြှောက်လဒ် သည် Grade Point ဖြစ်သည်။ ထို Grade Point စုစုပေါင်းကို ခရက်ဒစ် စုစုပေါင်းဖြင့် စားခြင်းဖြင့် ပျမ်းမျှဂရိတ် (GPA) ကိုရရှိသည်။
တွက်ချက်ပုံကို ဇယားကွက်ဖြင့် ပြလျင် ပို၍ ရှင်းပေလိမ့်မည်။
A (ie. 4)
C (ie. 2)
B (ie. 3)
အကြမ်းဖျဉ်း ပြောရလျင် ဘာသာအားလုံး ဂရိတ်အေ ရသူတစ်ယောက်၏ ပျမ်းမျှဂရိတ် မှာ ၄ ဖြစ်ပြီး၊ ဘာသာအားလုံး ဂရိတ်ဘီ ရသူတစ်ယောက်၏ ပျမ်းမျှဂရိတ် မှာ ၃ ဖြစ်သည်။
ကျောင်းတစ်ကျောင်း နှင့် တစ်ကျောင်း၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ နှင့် တစ်နိုင်ငံ ကွာခြားမှုရှိနိုင်သည်။
၂၂၊ ၇၊ ၂၀၀၇
ဘဇာကြောင့် ဘလောက် လုပ်ဖြစ်သနည်း
ကိုဝေက ဘလောက်ဂါနေ့အတွက် ရှေ့ကင်းထွက် ရေးခိုင်းလေသည်။ ဘဇာကြောင့် ဘလောက် လုပ်ဖြစ်ပါသလဲ တဲ့။ အမေးရှိက အဖြေ ရှိရပေမည်။ ရေးချင်လျက် မောက်စ်တို့ ဖြစ်လေပြီ။
စာရေးရာတွင် ရေးချင်လို့ရေးသူ နှင့် ပြောချင်လို့ရေးသူ ဟူ၍ နှစ်မျိုး ရှိသတတ်။ ကျွန်ုပ်ကား ဒုတိယ အမျိုးအစားတွင် အကျုံးဝင်လေသည်။ ဘဇာတွေ ပြောချင်သနည်းဟု မပြောမီ ကျွန်ုပ်အကြောင်းကို အနည်းငယ်ရှင်းအံ့။ သို့မှသာ စာရှုသူတို့ ဇာတ်ရည်လည်ပေမည်။
ကျွန်ုပ်၏ ပင်ကိုယ်သဘာဝကိုက Hub ( ကွန်ပျူတာများကို ချိတ်ဆက်ပေးသည့်ဗူး ) နှင့်တူသည်။ ကျောင်းမှ သူငယ်ချင်းများကို အိမ်မှ သူငယ်ချင်းများနှင့်၎င်း၊ အိမ်မှ သူငယ်ချင်းများကို အလုပ်မှ သူငယ်ချင်းများနှင့်၎င်း၊ အလုပ်မှ သူငယ်ချင်းများကို ခြေလျင်တောင်တက်အသင်းမှ သူငယ်ချင်းများနှင့်၎င်း၊ ခြေလျင်တောင်တက်အသင်းမှ သူငယ်ချင်းများ ကို နိုင်ငံခြားမှ သူငယ်ချင်းများနှင့်၎င်း၊ နိုင်ငံခြားမှ သူငယ်ချင်းများကို ကျောင်းမှ သူငယ်ချင်းများနှင့်၎င်း၊ ချိတ်ဆက်ပေးတတ်သော သဘောရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်ပတွင် ကာလအတန်ကြာနေထိုင်ရစဉ် ထိုထိုဤဤသော မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းများ နှင့် ဆွေမျိုးများကို အဆက်အသွယ်ပြုရန် ကိစ္စကို တာဝန်ဝတ္တရား တစ်ခုအနေဖြင့် မြင်မိလေသည်။ သို့ရာတွင် ကျောင်းစာပိခြင်း၊ ဗာဟီရ များခြင်း၊ စာရေးပျင်းခြင်း အစရှိသည့် ပျင်းရိခြင်း အဖြာဖြာတို့ကြောင့် အဆက်အသွယ် နည်းပါးနေရာ စိတ်မကောင်းခြင်း ကြီးစွာဖြစ်ရလေသည်။
အတန်းကျောင်း တက်စဉ်အချိန်ကိုလည်း အနည်းငယ် ပြောလို၏။ ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘ၀က သင်္ချာ၊ သိပ္ပံ အစရှိသည့် ဘာသာရပ်များတွင် မဆိုးလှသော်လည်း မြန်မာစာအတွက် ဆိုလျင် သင်ကြားသူဆရာ၊ သင်အံသူကျွန်ုပ်အပြင်၊ ချစ်လှစွာသော မိဘနှစ်ပါးသာမက ကြီးဒေါ်များပါ စိတ်ဒုက္ခကြီးစွာ ရောက်ကြရသည်။ စာစီစာကုံးကို အဖြစ်ရှိအောင်မရေးမူ၍ ဖြစ်၏။ ဆရာ၊ မိဘတို့ကား ကျွန်ုပ်ကို ခြောက်ချီတခါ မာန်ချီတလှည့်ဖြင့် စာစီကုံးခိုင်းကြသည်။ ဆရာတစ်ဦးဆိုလျင် ရည်းစားသညာ ထားပါမည့်အကြောင်း တိုက်တွန်းလေသည်။ သို့မှသာ ဖွဲ့နွဲ့သီကုံး ချယ်မှုန်းတတ်လာမည်ဟု ဆို၏။ ဒို့ကျောင်းသား စာစီစာကုံးများ အတွဲလိုက်ဝယ်၏။ ဆရာ ဂုဏ်ထူးဦးသိန်းနိုင်ပြောသလို မှတ်တမ်းစာအုပ်ထား၍ မှတ်သား၏။ ရေးခိုင်းသမျှ ရေး၏။ ရည်းစားသညာကား အဖြစ်မရှိခဲ့။ အမှန်ကား ဆရာကသာ ရည်းစားထားရန် တိုက်တွန်းနေသည် ဆရာ၏ အမျိုးသမီး (ဆရာ ကတော်) က ကျွန်ုပ်၏ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲရှိ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် မိန်းကလေးသူငယ်ချင်း ဓါတ်ပုံကို သိမ်းယူကာ ဆိုဆဲခဲ့သောကြောင့် နောက်တွန့်သွားခဲ့ခြင်းပင်။ သို့နှင့် ပထမနှစ် ဆေးကျောင်းသားသာ ဖြစ်လာသည် စာစီစာကုံး နှင့် အကျွန်ုပ်ကား ဆားနှင့်တီ ပမာ ရှိနေသေးသည်။ ပထမနှစ်လွန်မြောက်၍ မြန်မာစာ ကို သင်ကြားရန်မလိုတော့သောအခါ ၀မ်းမြောက်သည်မှာ ဆိုဖွယ်ရာမရှိ။
ကံကြမ္မာဘီးရဟတ် တပတ်ပြန်လည်လာတတ်သည်ကို ထိုအချိန်က သတိမထားမိ။ ငယ်သေးသည် မဟုတ်တုံလော။ ဘ၀ရထားကြီးကို စီးနင်းပြီးသကာလ တဘူတာပြီးတဘူတာ ကျော်ဖြတ်ကာ မဟာဘွဲ့ တက်ရန် အကြောင်းဖန်လာ၏။ ဤတွင် သံတူကြောင်းကွဲ ပြဿနာ ပြန်စတော့သည်။ ဘိုလို စာစီကုံးရခြင်းပင်။ နဂိုကပင် မရှိလေတော့ နဂိုင်းကလည်း မပြောင်ရောင်။ စာလုံးရေ ၅၀၀ ရှိသော စာစီစာကုံးရေးခိုင်းလျင် အမေရိကန်ကျောင်းသားများက စာလုံးရေ ၅၀၀ နဲ့ ဘာသွားရေးရမည်နည်းဟု စိတ်တိုနေချိန်တွင် ကျွန်ုပ်ကား စာလုံးရေ ၄၅၀ လောက်ကို ဖြစ်ဖြစ်မည်အောင် ရေးတင်ခဲ့ရသည်။ ရှေးဘ၀ကုသိုလ် လက်ကျန်လေးကြောင့် မဟာဘွဲ့လေးတော့ ရသွားခဲ့သည်။ စာအရေးရ လွတ်ပြီလားဆို မလွတ်သေးပါ။ ပညာလောဘကြောင့် ပါရဂူဘွဲ့တက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်က ပြည်ပကို ရောက်ခဲ့ရပြန်သည်။
အခုမှ ဒုက္ခလှလှ တွေ့တော့သည်။ စာတွေပိုဖတ်ရသည်။ ပိုရေးရသည်။ စာလုံးပေါင်း သဒ္ဒါလည်း အမှားမခံတော့။ သြော် … အရင်ဘ၀က အမှတ်ခြစ်ကြမ်းသော ဆရာ ဖြစ်ခဲ့လေသလား။ ဘာသာတွေးမိသည်။ လောက် ဖြစ်မှတော့ မစင် ကြောက်နေလို့ မဖြစ်တော့ပြီ။ ဓါတ်ကြမ်းတိုက်မှ ရတော့မည်ဟု စိတ်အချဉ်ပေါက်လာသည်။
ထိုအချိန်မှာပင် မီးလောင်ရာလေပင့် ဆိုသကဲ့သို့ ပြောချင်လာသော အကြောင်းများကလည်း စုပုံလာသည်။ သူများပြောတာချည်း နားထောင်ခဲ့ရတာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်း အတော် (အတိအကျတော့ မပြောလိုတော့) ကြာခဲ့ပြီ။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဘာသာရပ်အကြောင်း ပြောလိုသည်။ လူငယ်များ ၀ိုင်းဝန်းကျိုးစားကြပါမည့် အကြောင်း ပြောလိုသည်။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းများ ဆွေးနွေးလိုသည်။ အတင်းတုတ်လိုသည်။ ဟာသများ ဝေမျှလိုသည်။ ရောက်တတ်ရာရာ ရေးလိုသည်။
ပြန်၍ အနှစ်ချုပ်ရလျင် ဆွေမျိုး၊ မိတ်သင်္ဂဟများကို အဆက်အသွယ်လုပ်လိုခြင်း၊ စာစီစာကုံးအရေး လေ့ကျင့်လိုခြင်း၊ ရင်ထဲမှ စကားများကို ဖွင့်အန်ထုတ်လိုခြင်း စသည့် အကြောင်း သုံးပါးကြောင့် ဘလောက်ရေးဖြစ်လာရပါသည်။
ဘာကြောင့် ဆက်ရေးဖြစ်နေသလဲ။ ကိုဝေကတော့ မမေးပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်ုပ်ကား ရေးစရှိလျင် ရပ်၍ မရတော့ပြီ။ ပြောရပေဦးမည်။ ပြောခွင့်ပြုပါ။
ကနဦးတွင် ကျွန်ုပ်ဘလောက်က ပေါက္ခ၀ဿ ဘလောက် ဖြစ်၏။ မြင်စေချင်သူများကိုသာ မြင်စေပြီး၊ မမြင်စေချင်သူများကို မမြင်စေအောင် စီမံထားရှိခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် မြင်စေချင်သူများက တော်တော်နှင့် လာရောက် မကြည့်ကြပြီ။ သူတို့ကိုလည်း အဆိုးမဆိုသာ။ စာစီစာကုံးရေးရန် တဆွေလုံးတမျိုးလုံး ၀ိုင်းတွန်းခဲ့ရသူတစ်ယောက်၏ ဘလောက်ကို မည်သည့် အကြောင်းသိသူက မော်နီတာ အပွန်းခံ၊ ဇက်ကြောအတက်ခံ၍ လာဖတ်မည်နည်း။ ဓမ္မတာပင်။
သို့နှင့် နည်းဗျူဟာပြောင်းရပြန်သည်။ လူတိုင်းဖတ်ရှုရနိုင်အောင် ပြုလုပ်သည်။ ဆီပုံးတွင် ကြော်ငြာဝင်သည်။ ဓါတ်စာ စာရင်း (Email list) (ဓါတ်မီး၊ ဓါတ်ရထား၊ ဓါတ်တိုင်၊ ဓါတ်မှန် … စသည်တို့ကဲ့သို့ ဓါတ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော စာ ဖြစ်သဖြင့် ဓါတ်စာ ဟု ခေါ်သင့်သည်။) ထဲတွင် ပါသမျှ မိတ်ဆွေများထံ ဓါတ်စာပို့ အကြောင်းကြားသည်။ မိမိဓါတ်စာ၏ အောက်ပိုင်းကျကျလောက်တွင် ခေတ်မီသူတိုင်း ဤဘလောက်ကိုကြည့်ကြသည် ဟု ရေးသည်။
ရလာဒ်ကား မဆိုးတော့ပြီ။ အကြောင်းမသိသူတို့၊ မျက်စိလည် လမ်းမှားကာ ရောက်လာသူတို့၊ မောက်စ် ကလစ်အလုပ်မြန်သူတို့ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုကြသည်။ ဖတ်ရှုသူအချို့ကား အားလုံးကောင်းပါသည်၊ နောက်မဆုတ်နဲ့ ကိုကံချွန်၊ ဆက်လုပ် ကိုယ့်လူ စသည်ဖြင့် အဆင်းဘီးတတ် မှတ်ချက်များ ပေးသွားသည်။ မနုဿဗေဒ ပညာရှင်တို့က ထိုမှတ်ချက်မျိုးသည် လူအချင်းချင်း ပလဲနံပ သင့်ရန် ပြောခြင်းမျိုးဖြစ်ကြောင်း၊ အတည်ယူ၍မရနိုင်ကြောင်း ဆို၏။ ပညာရှင်တို့ မည်သို့ဆိုစေကာမူ ကျွန်ုပ်ကား ဘလောက်ဂါများကို များစွာ ယုံကြည်လေးစားခြင်း ဖြစ်မိပြီး ရှိရကား ထိုမှတ်ချက်များကို အထူးဂရုပြုလေ၏။
ထို့ပြင်တ၀ အကောင်အထည်မပေါ်သော မိတ်ဆွေ များစွာ တိုးလာသည်။ ရှည်သည်၊ တိုသည်၊ ပိန်သည်၊ ၀သည်၊ ညိုသည်၊ ဖြူသည်၊ ဘာမျှ မသိမူလည်း စိတ်ဝင်စားမှုခြင်းတူသူ၊ မိမိရေးသားသည်ကို မှတ်ချက်ပေးသူ၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးသူ စသည်ဖြင့် ခင်မင်နှစ်လိုဖွယ် လူများစွာနှင့် သိကျွမ်းလာသည်။ ကျွန်ုပ် ငယ်စဉ်ကပင် မြန်မာပြည်ရှိ မြို့တိုင်း၊ နယ်တိုင်းတွင် ခင်မင်ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ရှိလိုသည်။ ရှိရန်လည်း ကျိူးစားခဲ့သည်။ အတော်လည်း ရှိလာသည်။ ယခုမူကား တကမ္ဘာလုံးရှိ တိုင်းပြည်တိုင်းတွင် ခင်မင်သော မိတ်ဆွေ ရှိချင်လာသည်။ ဤ ဘလောက်သည်ကား ထိုရည်ရွယ်ချက်ကို ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်ပေတော့မည်။ ကောင်းပေစွ။
ကျွန်ုပ်၏ မိဘနှစ်ပါး၊ ကြီးဒေါ်များ နှင့် မြန်မာစာ ဆရာ ဆရာမ အပေါင်းတို့အား ဤစာဖြင့် ကန်တော့အပ်ပါ၏။
6 comments Labels: autobio, burmese, general
0 comments Labels: funny, general, video
9 comments Labels: burmese, forget-me-not, general, politics
5 comments Labels: burmese, general
9 comments Labels: burmese, forget-me-not, general
Many Burmese public health professionals are preaching contemporary public health practices and saving lives all over the world while many more professionals back home are sweeping the corners where they are.
these two groups rarely met
their experiences rarely exchanged
their invaluable wisdom rarely conveyed
These days, blogs have become the media of choice for connecting people and sharing information. Increasing number of breaking news reach their audience through blogs bypassing traditional mass media; TV, Radio, and Newspapers.
Thus, we would like to use this efficient media; blog, and provideavenue to present and discuss public health issues being faced in Myanmar and potential solutions for them. This blog will also serve asaplace to share new breakthroughs in international public health arena. In order to reach wider audience, Burmese (Myanmar) language will mainly be used with occasional English language postings.
This isasample blog just to demonstrate how the real blog will look like. Blog name and address provided here isatemporary one. A "real" blog will be developed based on this template and an appropriate blog address and name will be given.
I humbly request you -aMyanmar public health professional - to participate in this joint blog if you could provide at least two message postings per month.
Please leave your name and contacts in the comment if you are interested to participate in this endeavor.
2 comments Labels: english, public health
ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အပြောင်းအလဲလေးပေါ့။ ကော်ဖီပူလေး သောက်လိုက်ပါဦး။ မှတ်ချက်လေးများလဲ ထားသွားပေးပါ။ ကျေးဇူး။
7 comments Labels: burmese, general
၁၁၊ ၇၊ ၂၀၀၇
အမေရိကားရောက် မြန်မာမိသားတစ်စု၏အိမ်တွင် မြန်မာအများ စုဆုံကြစဉ်ကဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တက္ကသိုလ် တတိယနှစ်အထိတက်ပြီး အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အမေရိကားရောက်လာသူ လူငယ်တစ်ဦးနှင့် အခြား လူကြီးတစ်ဦးတို့ စကား လက်ဆုံကျနေကြသည်။
လူကြီး။ ။ အေးကွာ ဦးလည်း ဒီရောက်နေတာ အနှစ်သုံးဆယ်လောက် ရှိပြီ။ မြန်မာပြည်ကိုတော့ အရမ်းသတိရနေတုန်းပဲ။
လူငယ်။ ။ ဟုတ်တယ် အန်ကယ်ရာ ကျွန်တော်လည်း အရမ်းသတိရတာပဲ။ အထူးသဖြင့် အစားအသောက်ပေါ့။
လူကြီး။ ။ မောင်ရင်က ဘယ်အစားအသောက်ကို ပိုသတိရလဲ။
လူငယ်။ ။ (ခေါင်းအနည်းငယ်ကုတ်၍) ဟိုလေ . . . ဟိုဟာ . . . အန်ကယ်ရာ . . . ခေါင်းပေါ်မှာ တောင်းနဲ့ရွက်ပြီး မနက်မနက်ဆို လာရောင်းတဲ့ ဟာလေဗျာ။ ကျွန်တော် ပါးစပ်ဖျားတင် မေ့နေတယ်။
လူကြီး။ ။ (မျက်မှောင်ကျုပ်လျက်) နေပါဦး မောင်ရင်ရဲ့ ပဲပြုတ် ကိုပြောတာလား။
လူငယ်။ ။ အား . . . သက်စ်ရိုက် . . . ဟုတ်တယ် . . . ဟုတ်တယ်။ ပဲ . . ပြုတ် ။ ပဲ . . ပြုတ် . . . ဟု ပြန်မမေ့ရန် ဆီမန်းမန်းသကဲ့သို့ တတွတ်တွတ် ရေရွတ်နေလေတော့သည်။
2 comments Labels: burmese, forget-me-not, general, jokes
8 comments Labels: burmese, forget-me-not, general, story
၉၊ ၇၊ ၂၀၀၇
မောင်ဂျော် နှင့် လေယာဉ်မှူး
ကျွန်ုပ်၏ ခင်လှစွာသော မိတ်ဆွေတစ်ဦးတွင် ချစ်လှစွာသော မောင်ဂျော်အမည်ရှိ သားတစ်ယောက်ရှိလေသည်။ ၄င်းသားမှာ မြန်မာမိဘနှစ်ပါးမှ အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် မွေးဖွားသန့်စင်သည့် မြန်မာအမေရိကန်လေးပင်ဖြစ်ညား မြန်မာစကားကို ရေလည်စွာ ပြောဆိုတတ်လေသည်။
တစ်နေ့သ၌ မိခင်နှင့်အတူ တခြားမြို့တစ်မြို့သို့ လေယာဉ်ဖြင့်သွားရန်ရှိလာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်တွင် ထိုင်ပြီးချိန်မှာပင်
ခရီးသည်များ ခင်ဗျား . . . လေယာဉ်မှူး စကားပြောနေပါတယ်။ အနောက်တောင် လေကြောင်းလိုင်းကိုရွေးချယ်သည့် အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ခရီးသည်များ ဤခရီးစဉ်ဖြင့် လိုက်ပါဖို့ရာ အလွန်တရာမှ စိတ်လှုပ်ရှားနေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ခရီးသည်များနဲ့ ထပ်တူစိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်ဟာ ကျွန်တော် လေယာဉ်မှူးအဖြစ် ပျံသန်းမယ့် ပထမဆုံး ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
ခရီးသည်များ ထံမှ လက်ခုပ်သံများ သောင်းသောင်းဖျဖျ ထွက်လာကြစဉ် . . .
မေမေ သံဗုဒ္ဓေလေး လုပ်ပါဦး။ ။
2 comments Labels: burmese, general, jokes
4 comments Labels: burmese, career-development
၅၊ ၇၊ ၂၀၀၇
မနေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဆိုတော့ တီဗွီမှာ လွတ်လပ်ရေး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ၊ သတင်း မှတ်တမ်းကားတွေ တောက်လျောက် ပြနေလေရဲ့။ အဲဒီထဲမှာ အမေရိကန် နိုင်ငံရဲ့ အခြေခံ ဥပဒေ ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးလည်း ပါလာတော့ နည်းနည်း စိတ်ဝင်စားသွားပြီး အင်တာနက်မှာ လိုက်ဖတ်မိတာလေးတွေ ပြန်ပြီး ရေးပြပါရစေ။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သမိုင်းနဲ့ တဆက်တစပ်တည်း ဆိုတော့ သမိုင်းကြောင်းလည်း နည်းနည်း ပါပါမယ်။
အမေရိကန်ရယ်လို့ ဖြစ်လာမယ့် အရှေ့ခြမ်း ကိုလိုနီ ပြည်နယ် ၁၃ ခုက ဗြိတိသျှ အင်ပါယာကို စတင် ပုန်ကန်
၄ ဇူလိုင် ၁၇၇၆
အမေရိကန် လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်း ကို ထုတ်ပြန် (လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဟု သတ်မှတ်)
Articles of Confederation လို့ခေါ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ကိုကွန်ဂရက်က စတင်ကျင့်သုံး
အမေရိကန် နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး ပြည်နယ် ၁၃ ခုစလုံးက Articles of Confederation လို့ခေါ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ကို အတည်ပြုပြီးတဲ့ အတွက် တရားဝင် အခြေခံ ဥပဒေ ဖြစ်လာ
Article of Confederation ကို ပြင်ဆင်ရန် ကွန်ဂရက် စည်းဝေး။ သို့သော် အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အခြေခံဥပဒေ အသစ်ရေးဆွဲ
အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲ ပြီးစီး။ ပြည်နယ် ၁၃ ခုတွင် အတည်ပြုရန်တင်ပြ
အခြေခံဥပဒေ ကို အတည်ပြုပြီးစီး
၁၇၈၉ - ၂၀၀၇
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ခြင်း စုစုပေါင်း ၂၇ ကြိမ်ပြုလုပ်
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အခြေခံဥပဒေ မှာ ရေးဆွဲချိန် စုစုပေါင်း ၄-လ ခန့် ကြာမြင့်ပြီး ပြင်ဆင်ခြင်းများ ရှိသည်မှ အပ နှစ်ပေါင်း ၂၁၈ နှစ်အထိ တည်တံ့နေပါသည်။
The United States Constitution – On Line
2 comments Labels: burmese, history, politics
၃၊ ၇၊ ၂၀၀၇
ဗိုလ်ချုပ်ကို ဘယ်သူ လုပ်ကြံသလဲ
အတန်းကျောင်းမှာ သင်ခဲ့ရသလို ဦးစော နဲ့ အပေါင်းပါများက လုပ်ကြံခဲ့ပါတယ် လို့ လွယ်လွယ်ပြောရင်လည်း ရသလို မြန်မာ ခေတ်သစ် ရာဇ၀င်မှာ သွေးစွန်းခဲ့ရတဲ့ အဖြစ် ဇစ်မြစ်ကို လိုက်ချင်တယ် ဆိုရင်ဖြင့် ဘီဘီစီက ၁၉၉၇ မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီ အစီအစဉ်လေးကိုလည်း ကြည့်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
2 comments Labels: burmese, forget-me-not, history, politics
၁၊ ၇၊ ၂၀၀၇
မမေ့လျော့ခြင်း ၏ ဟိုမှာဘက်တွင်
အိပ်မက်တွေ ပျက်မလိုလို ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
အိပ်မက်တွေလည်း လေမှာ ဝေ့နေတုန်း။
ညီအကိုချင်း သတ်ဖြတ်မှုတွေ ရပ်ကြ။
အိပ်မက်တွေ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ကြ။
5 comments Labels: burmese, forget-me-not, poem, politics